July 23, 2013 – democracy for burma
24-7-2013 ရက်စွဲပါ မြန်မာပို့စ် ဂျာနယ် အတွဲ (၅) အမှတ် (၁၉)မှ သတင်းတစ်ပုဒ်။
Burma Democratic Concern (BDC) welcomed the prisoners’ amnesty today
Amnesty granted to 73 Prisoners
Wed, 07/24/2013 – 09:48
Nay Pyi Taw, 23 July
With the aim of placing emphasis on humanitarian grounds and encouraging them to be able to serve the national interest after understanding the goodwill of the State, President of Republic of the Union of Myanmar has granted amnesty to 73 prisoners from respective jails in accord with Section 204 (a) of the Constitution and 401 (1) of the Code of Criminal Procedure as of today.
Burma Democratic Concern (BDC) welcomed the prisoners’ amnesty today. Burma Democratic Concern (BDC) sincerely believed that in order to build the peaceful prosperous progress Burma, we must have common position amongst all parties concerned by putting national interest first.
INVITATION SITAGU BUDDHIST ACADEMIES TO AMBASSADORS -ဗုဒ္ဓဂယာ အကြမ်းဖက်မှု သီတဂူသတင်း ထုတ်ပြန် (၀ါဆိုလပြည့်နေ့)
ယခုနှစ် ၀ါဆိုလပြည့်နေ့ (၂၂-၇-၂၀၁၃) နေ့က သီတဂူကမ္ဘာ့ဗုဒ္ဓတက္ကသိုလ် (ရန်ကုန်)တွင် တော်ဝင်မိသားစု ၀ါဆိုသင်္ကန်းကပ်ပွဲကျင်းပ။
အမျိုးသားဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ်ဥက္ကဋ္ဌ ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်အပါဝင်၊ မြန်မာနိုင်ငံဆိုင်ရာ အမေရိကန်သံအမတ်၊ အစ္စရေးသံအမတ်၊ ထိုင်းသံအမတ်၊ အင်ဒိုနီးရှား သံအမတ်စသော နိုင်ငံတကာ သံအမတ်များ၊ ဖိတ်ကြားထားသူ ပရိသတ်များစွာ တက်ရောက် ကြည်ညိုကြသည့် ထိုပွဲကြီးမှာ သီတဂူဆရာတော်ကြီးက ဗုဒ္ဓဂယာ အကြမ်းဖက်မှုကို သီတဂူသာသနာပြုအဖွဲ့အနေဖြင့် ရှုတ်ချကြောင်း အောက်ပါအတိုင်း ကြေညာသည်။ +++++++++++++++
သီတဂူအပြည်ပြည်ဆိုင်ရာ သာသနာပြုအဖွဲ့၏ အိန္ဒိယနိုင်ငံ ဗုဒ္ဓဂယာတွင် ဗုံးခွဲအကြမ်းဖက်မှုကို ရှုတ်ချခြင်း
(၂၂-၇-၂၀၁၃) ၂၀၁၃ ခုနှစ် ဇူလိုင်လ(၇) ရက်နေ့ ကအကြမ်းဖက်သမား တစ်ချို့အကြောင်းမဲ့ သက်သက် ယုတ်မာ သိမ်ဖျင်းသော စိတ်ထားဖြင့် အကြမ်းဖက်မှု့ လွန်ကျုးခဲ့သည့်လုပ်ရပ်အပေါ် သီတဂူအပြည်ပြည်ဆိုင်ရာ ဗုဒ္ဓသာသနာပြုအဖွဲ့က အလွန်အမင်း ထိတ်လန့် တုန်လှုပ်ခဲ့ပါသည်။
အဲဒီ အကြမ်းဘက် သိမ်ဖျင်းသည့် လုပ်ရပ်သည် သီးခံခြင်းနှင့် အကြမ်းမဖက်ခြင်း တည်းဟူသော ဗုဒ္ဓဘုရားရှင်၏ အဆုံးအမ အနှစ်သာရနှင့်တကွ အခြားဘာသာကြီး လေးရပ် ခရစ်ယာန်၊ အစ္စလာမ်၊ ဟိန္ဒူ၊ ဂျုးတို့၏ အဆုံးအမများနှင့်လည်း ဖြောင့်ဖြောင့်ကြီး ဆန့်ကျင်လျှက်ရှိသည်ဟု သီတဂူအဖွဲ့က ယုံကြည်ပါတယ်။
ဗုဒ္ဒဘုရားရှင်၏ အဆုံးအမများကို ကမ္ဘ့ာ့ဘာသာကြီး လေးရပ်တို့က ကမ္ဘာ့ငြိမ်းချမ်းရေးဆိုင်ရာ အမှန်တရားအဖြစ်လဲ လက်ကိုင်ယုံကြည်တယ်လို့ သီတဂူအဖွဲ့က ယုံကြည်ထားပါတယ်။ အခု အကြမ်းဖက်လုပ်ရပ်သည် ကမ္ဘာ့ငြိမ်းချမ်းရေးနှင့် တည်ငြိမ်ရေးကိုသာမက ကမ္ဘာ့ဘာသာရေးနှင့်ယဉ်ကျေးမှု့ အမွေအနှစ်များ ထိန်းသိမ်း စောင့်ရှောက်ရေးကိုလဲ ခြိမ်းခြောက်လျှက်ရှိသည့် အတွက် သီတဂူအပြည်ပြည်ဆိုင်ရာ ဗုဒ္ဓသာသနာပြုအဖွဲ့ ပြင်းထန်စွာ ကန့်ကွက် ရှုတ်ချလိုက်သည်။
တစ်ဆက်တည်းမှာ ကမ္ဘာ့ဘာသာရေးခေါင်းဆောင်များအားလုံးက ကမ္ဘာ့ဘာသာရေးနှင့် ယဉ်ကျေးမှု အမွေအနှစ်များကို ထိန်းသိမ်းစောင့်ရှောက်ရင်း ကမ္ဘာကြီး၏ ငြိမ်းချမ်းရေးနှင့် တည်ငြိမ်ရေးကိုပါ ထိန်းသိမ်းစောင့်ရှောက်နိုင်မည့် နည်းလမ်းတစ်ခု ၀ိုင်းဝန်းလက်တွဲ ရှာဖွေ သွားကြရန် တိုက်တွန်းပါသည်။
အိန္ဒိယနိုင်ငံ အစိုးရကလဲ ဤကဲ့သို့ မိုက်မဲသော ပြစ်မှုလွန်ကျုးခဲ့သူများကို ထိထိရောက်ရောက် ဖေါ်ထုတ်ပြီး ပြင်းပြင်ထန်ထန် အရေးယူသွားရန် ယခုကဲ့သို့ မလိုလားအပ်သောဖြစ်ရပ်မျိုး ထပ်မံ ဖြစ်ပွားခြင်း မရှိရလေအောင် လိုအပ်သော စီမံချက်များကို ချမှတ်ဆောင်ရွက်သွားပါရန် အိန္ဒိယအစိုးရကို အလေးအနက်ထား၍ တောင်းဆို တိုက်တွန်းပါသည်။
ကမ္ဘာတလွှားက ဗုဒ္ဓဘာသာဝင်အားလုံး တို့လည်းပဲ ယခုကဲ့သို့ နာကျည်းဖွယ် အခြေအနေမျိုးနှင့် ရင်ဆိုင်ရချိန်မှာ ဗုဒ္ဓဘုရားရှင်၏ အဆုံးအမဖြစ်သော သီးခံခြင်း၊ ခွင့်လွှတ်ခြင်း၊ အကြမ်းမဖက်ခြင်းတို့ကို မမေ့မပျောက်၊ စွဲစွဲမြဲမြဲ လိုက်နာ ကျင့်သုံးသွားကြရန် အလေးအနက်တိုက်တွန်း လိုက်ရပါသည်။
ပင်လုံလမ်း၊ ပါရမီလမ်းထိပ်၊ မြောက်ဒဂုံ၊ ရန်ကုန်မြို့၊
Yangon Police: တွံတေးမြို့နယ်၊ ကြည်တန်းရွာလူသတ်မှုမှတရားခံများ ဖော်ထုတ်ဖမ်းဆီးခြင်း
၁၅.၇.၂၀၁၃ ရက်နေ့ ၁၉၀၀ အချိန် တွံတေးမြို့နယ်၊ ကြည်တန်းရွာနေ
ဒေါ်သန်းမြင့်(ခ)ဒေါ်သန်းစိန် သည် ၎င်း၏လယ်တောအိမ်အနီးရှိ ကွမ်းခြံအတွင်းဦးခေါင်းပြတ်လျက် သေဆုံးနေသဖြင့် ခင်ပွန်းဖြစ်သူ ဦးကြီးမောင်မှ စုံစမ်းအရေးယူပေးပါရန်တိုင်တန်းခဲ့၍ ခလောက်ချိုက်
နယ်မြေရဲစခန်း (ပ)၆၃/၂၀၁၃၊ ပုဒ်မ ၃၀၂ ဖြင့် အရေးယူစုံစမ်းဖော်
ရဲတပ်ဖွဲ့မှူး၏လမ်းညွှန်ကြီးကြပ်မှုဖြင့် တိုင်း/ခရိုင်၊ မြို့နယ်များမှ
တပ်ဖွဲ့ဝင်များပူပေါင်း၍စုံစမ်းဖော်ထုတ်ခဲ့ရာ သေဆုံးသူ ဒေါ်သန်းမြင့်
(ခ)ဒေါ်သန်းစိန်နှင့် တဲနီးချင်းကပ်နေထိုင်သော ယခင်ကလယ်
ပြဿနာဖြစ်ခဲ့ဘူးသည့် ထူးနိုင်၊(၂၉)နှစ်၊ (ဘ)ဦးစိုးမြင့်၊ သံဖြူ
ရုံကျေးရွာ၊တွံတေးမျြိ့နယ်နေသူမှ တွံတေးမျြို့နယ်၊ ဘုရားငုတ္တို
(၂၅)နှစ်၊ (ဘ)ဦးအေးလွင်တို့(၂)ဦးအား ငွေပေးစေခိုင်းပြီး
ထွန်းမင်းလတ်(ခ)မောင်ထွန်း(ခ)ထော်ကြီး တို့မှလည်း ကျူးလွန်
ပြစ်မှုကျူးလွန်ရန်အတွက် ထူးနိုင်မှ ပေးအပ်ထားသည့် ကြိုတင်ငွေ
အဆိုပါအမှုအား အချင်းဖြစ်ပြီး (၆) ရက်အကြာတွင် စုံစမ်းစစ်ဆေး
COMPANY OWNERSHIP PROFILE:ဦးဆက်အောင်တို့ ရွေးတဲ့ ကုလားသတို့သမီး အူရီဒူ (Ooredoo) ရဲ့ ကောက်ကြောင်း နောက်ကြောင်း
ဦးဆက်အောင်တို့ ရွေးတဲ့ ကုလားသတို့သမီး အူရီဒူ (Ooredoo) ရဲ့ ကောက်ကြောင်း နောက်ကြောင်း
စစ်တွေ ၊ ၂၀ ဇူလိုင် ၂၀၁၃ ၊ Coral Arakan News ၊ [ ဥတုခင်စိုင်း မှတ်စု ]
ပြီးခဲ့တဲ့ ဇွန်လ (၂၇) ရက်နေ့က မြန်မာနိုင်ငံအတွက် ဆက်သွယ်ရေးကွန်ရက် အော်ပရေတာ လိုင်စင် နှစ်ခုကို ချပေးရာမှာ မူဆလင်အာရပ် ကာတာနိုင်ငံအခြေစိုက် အူရီဒူ (Ooredoo) အုပ်စုဟာလည်း နော်ဝေး Telenor နဲ့ အတူ အရွေးချယ်ခံ အော်ပရေတာဖြစ်လာပါတယ်။
ဒီမှတ်စု မှာ အူရီဒူနဲ့ ပတ်သက်တဲ့ အကြမ်းဖျင်း ကောက်ကြောင်းပုံရိပ်ကို ရှာဖွေ မှတ်စု ထုတ်ထားပါတယ်။ သုံးသပ် ဆုံးဖြတ်လိုသူများအတွက် အချက်အလက် စုစည်းပေးတဲ့ သဘော ဖြစ်ပါတယ်။
(၁) အူရီဒူ အုပ်စု ဟာ အများပိုင် ကုမ္ပဏီပုံစံ ဖွဲ့စည်းထားပေမယ့် ကာတာအစိုးရ ထိန်းချုပ်ထားတဲ့ တယ်လီ ကွန်မျူနီကေးရှင်း အော်ပရေတာ ကုမ္ပဏီကြီးဖြစ်ပါတယ်။ ယခင်က Qatar Telecom (Qtel) လို့သိကြတဲ့ ဒီကုမ္ပဏီကို ၁၉၈၇-ခုနှစ်မှာ စတင်တည်ထောင်ခဲ့ပြီး မကြာသေးတဲ့ ၂၀၁၃-ခုနှစ် ဖေဖော်ဝါရီလကမှ Ooredoo ဆိုတဲ့ နာမည်သို့ ပြောင်းလဲခဲ့ပါတယ်။
(၂) ပူးတွဲပါ chart မှာ ပြထားတဲ့အတိုင်း ကာတာနိုင်ငံ (တစ်နည်း၊ ကာတာအစိုးရ) က အူရီဒူ အစုရှယ်ယာအားလုံးရဲ့ ၅၂% ကို ပိုင်ဆိုင်ပါတယ်။ ကာတာအစိုရအဖွဲ့နဲ့ ပတ်သက်တဲ့ အဖွဲ့အစည်းတွေက ၁၇% ပိုင်ပါတယ်။ ADIA (Abu Dhabi Investment Authority)Ooredoo လို့ခေါ်တဲ့ ယူအေအီးနိုင်ငံက အဘူဒါဘီ စော်ဘွားပြည်နယ်ရဲ့ စုပေါင်း ကြွယ်ဝမှုရံပုံငွေ က အူရီဒူရဲ့ ရှယ်ယာ ဆယ်ရာခိုင်နှုန်းကို ၀ယ်ယူပိုင်ဆိုင်ထားပါတယ်။ ဒိုဟာ ဆီကျူရတီဈေးကွက်မှာ ၁၉၉၈ အများပိုင် ကုမ္ပဏီအဖြစ် စာရင်းတင်ပြီး ရှယ်ယာ စတင်ရောင်းချခဲ့တာ ဖြစ်ပါတယ်။
(၃) အူရီဒူ ဆက်သွယ်ရေးကွန်ရက်ကို သုံးစွဲကြသူပေါင်း (၉၁) သန်းကျော်ရှိတဲ့အထဲမှာ ကာတာနိုင်ငံအတွင်းက သုံးစွဲသူတွေဟာ ၃% မျှသာ ရှိပြီး အင်ဒိုနီးရှားနိုင်ငံထဲက သုံးစွဲသူ (၆၂)% ရှိပါတယ်။
(၄) နော်ဝေးအစိုးရကထိန်းချုပ်ထားတဲ့ Telenor ဟာ ထိုင်းနဲ့ ဘင်္ဂလာဒေ့ရ်ှက သုံးစွဲသူတွေအပါအ၀င် ကမ္ဘာတစ်ဝှမ်းက သုံးစွဲသူပေါင်း သန်း (၁၅၀) ကျော်ကို ၀န်ဆောင်မှုပေးနေတဲ့ ကုမ္ပဏီဖြစ်ပါတယ်။
(၅) အူရီဒူ (ထိုစဉ်က အခေါ် Qtel) ဟာ Skype အစရှိတဲ့ အင်တာနက်က ရုပ်/သံစကားပြောကွန်ရက် (VoiP) စနစ်တွေကို ပိတ်ပင်ခဲ့ဖူးတဲ့ အစဉ်အလာရှိတယ်။
(၆) ၂၀၀၆-ခုနှစ်အတွင်း အူရီဒူ (ထိုစဉ်က အခေါ် Qtel) ရဲ့ proxy server တွေက အိုင်ပီလိပ်စာတွေကနေ အင်တာနက် သုံးစွဲသူတွေဟာ အခမဲ့ အွန်လိုင်း စွယ်စုံကျမ်း ၀ီကီပီးဒီးယားကို ဖျက်လိုဖျက်ဆီး အမှောင့်လုပ်ရပ်တွေလုပ်တဲ့အတွက် ၀ီကီပီးဒီးယား ၀က်ဘ်ဆိုက် ကို ထိန်းချုပ်သူတွေက အဲသည် Qtel ကို သုံးစွဲနေသူတွေမှန်သမျှ ၀ီကီပီးဒီးယားမှာ ၀င်ရောက်ရေးသား တည်းဖြတ်ခြင်း မပြုနိုင်နိုင်အောင် ဘလော့ခ်လုပ် ပိတ်ပစ်လိုက်ဖူးတယ်။ အဲသည်လို ကန့်သတ်ပိတ်ပင်မှုဟာ အယ်ဂျာဇီးယား ရုပ်သံဌာနအပါအ၀င် ကာတာတစ်နိုင်ငံကို သက်ရောက်ခဲ့တယ်။ ဒါကို နည်းပညာပိုင်းဆိုင်ရာ ၀က်ဘ်ဆိုက်တွေမှာ ကျယ်ကျယ်ပြန်ပြန့် ရေးသားဖော်ပြခြင်းခံရတဲ့အတွက် ဒီပိတ်ပင်မှုကို နာရီပေါင်းများစွာအကြာမှာ ပြန်လည် ဖွင့်ပေးခဲ့တယ်။
(၇) လိုင်စင်ချပေးဖို့ အရွေးချယ်ခံရတဲ့ အူရီဒူ ဟာ မြန်မာနိုင်ငံထဲက ဆက်သွယ်ရေးကွန်ရက်ကို တိုးချဲ့တည်ဆောက်ဖို့ရာ ဒေါ်လာ (၁၅) ဘီလီယံ အကုန်အကျခံပြီး လုပ်ဆောင်မယ်လို့ ကြော်ငြာထားသူဖြစ်တယ်။ Digicel က ကိုးဘီလီယံ အကုန်အကျခံမယ်လို့ ကြေငြာထားပြီး၊ အရံ တတိယကုမ္ပဏီအဖြစ်သာ စာရင်းပေါက်သွားတဲ့ ပြင်သစ်က Telecom Orange ကတော့ တစ်ဘီယံသာ သုံးစွဲလုပ်ဆောင်မယ်လို့ ကတိပြုထားသူဖြစ်တယ်။
(၈) တင်ဒါအောင်သူ အော်ပရေတာနှစ်ဦးကို ရွေးချယ်ရာမှာ ဦးဆက်အောင် ဦးဆောင်တဲ့ ရွေးချယ်ရေးကော်မီတီ (နာမည် အပြည့်အစုံ အားဖြင့် Telecommunications Operator Tender Evaluation and Selection Committee ခေါ် TOTSC) က တိုက်ရိုက်ရွေးချယ်တာ မဟုတ်ဘူးလို့ဆိုပါတယ်။ ဒီကော်မီတီက ဂျာမနီနိုင်ငံ မြူးနစ်မှာ ရုံးချုပ်ထားရှိတဲ့ စီးပွားရေး အကြံပေး ပညာရှင်အုပ်စု Roland Berger Strategy Consultants ကို ငှားရမ်းတာဝန်ပေးခဲ့တယ် လို့ဆိုပါတယ်။
(၉) အဲသည် Roland Berger က ကျွမ်းကျင်သူ ပညာရှင်တွေဟာ အမှတ် (၁၅၀၀) အမှတ်ပေးစည်းမျဉ်းအရ တင်ဒါဆွဲသူများကို အကဲဖြတ်ရာမှာ အမှတ် (၁၀၀၀) က နည်ပညာပိုင်းဆိုင်ရာအကဲဖြတ်ချက်တွေဖြစ်ပြီး ကျန်အမှတ် (၅၀၀) ကတော့ ငွေရေးကြေးရေးပိုင်းကို အကဲဖြတ်အမှတ်ပေးခဲ့တာလို့ ဆိုပါတယ်။
(၁၀) တင်ဒါလျှောက်ထားသူ ပေါင်း ကိုးဆယ်ကျော်အနက် ဆယ့်နှစ်ဖွဲ့ကို ရွေးချယ်ရေးအဖွဲ့က ရွေးထုတ်ခဲ့ပြီးနောက် အဲသည် ဆယ့်နှစ်ဖွဲ့ထဲက ထိပ်တန်းအတွဲဖြစ်တဲ့ Vodafone နဲ့ China Mobile တို့တွဲထားတဲ့ အဖွဲ့က မိမိတို့သဘောအလျောက် နှုတ်ထွက်သွားခဲ့တယ်။ ကျန်တဲ့ ဆယ့်တစ်ဖွဲ့ထဲက အတွဲလိုက် ပါတနာဖွဲ့ပြီး လျှောက်ထားသူတွေ မရဘဲ တစ်ကုမ္ပဏီချင်းလျှောက်ထားတဲ့ Ooredoo နဲ့ Telenor တို့ တင်ဒါအောင်ခဲ့တယ်။ Orange ကတော့ အရံ စာရင်းပေါက်ခဲ့တယ် လို့ သတင်းထွက်ပါတယ်။
(၁၁) အခု ဆယ့်ငါးနှစ်သက်တမ်း အော်ပရေတာလိုင်စင်ဟာ သက်တမ်းကုန်ချိန်မှာ နောက်ထပ်ဆယ်နှစ် ထပ်တိုးကောင်းတိုး ပေးဦးမှာ ဖြစ်ပါတယ်။ လိုင်စင်ရသူ အော်ပရေတာတွေဟာ အသံပိုင်းကွန်ရက်ကို မြန်မာန်ိုင်ငံရဲ့ ၂၅% နဲ့ အချက်အလက်ကွန်ရက်ကို နိုင်ငံရဲ့ဆယ်ရာခိုင်နှုန်း ဆက်သွယ်ပို့ဆောင်နိုင်အောင် တစ်နှစ်အတွင်းမှာ တည်ဆောက်လုပ်ဆောင်ကြရမှာ ဖြစ်ပါတယ်။
၀ဲဘက်ပုံ – အစ္စလမ်ဘာသာဝင်များ ၏ ယခု ရမ္မဒန် ဥပုသ်ကာလတွင် ကာတာနိုင်ငံအတွင်း အးရီဒူ၏ လူထုဆက်ဆံရေး နှင့် အရောင်းမြှင့်တင်ရေး အစီအစဉ်အဖြစ် alrabaa ဇာတ်ကောင်များဖြင့် ပြုလုပ်သွားမည်ဖြစ်ကြောင်းကို ကုမ္ပဏီ၏ ဌာနခွဲ ဒါရိုက်တာများဖြစ်ကြသည့် မူစတာဖာ အယ်ကာတာမီ နှင့် ဖာတီမာ အယ်ကူဝါရီ တို့က ဇွန်လ (၃၀) ရက်နေ့က မီဒီယာနှင့် တွေ့ဆုံရှင်းလင်းပွဲ ပြုလုပ်စဉ်။
ယာဘက်ပုံ – အူရီဒူ ရှယ်ယာများ ပိုင်ဆိုင်မှုပြ ဂရပ်ပုံ။
EXTREMISTS Attack religious preaching ceremony of Buddhist monk Sayadaw U Wirathu-video
The blast attack that was carried out at the 5th anniversary of Thahaponnyacaribon Donation Association of Mandalay on Sunday was believed to have come fromabomb that was handmade, according to Mandalay region police force office.
In connection with the blast, the authorities are blocking the entrance and exit of Mandalay to search the suspects of blast.
The explosive was placed underaparked car nearareligious sermon preached by Buddhist monk Sayadaw U Wirathu in Mahaaungmyay Township about9PM at night and damaged two rear wheels, front right side wheel and the car right side body nearapassenger door.
Police Major Soe Nyein said, “We found about four pieces of cast iron near the car. The right side of passenger door is damaged in3or4places and petrol tank hadahole. The police are surrounding around the areas of Mandalay to search and inquire about the suspects.”
The blast caused one novice and four people injured and one woman is sent to Mandalay General Hospital.
A resident lived near the blast said about his experience, “I heard first the loud noise and at that time, the sermon is not finished. I noticed that the blast is loud because it has happened near microphone. A whistle-blower of the monk announced that it isatyre blast but later confirmed that the blast is occurred byaminor handmade bomb. The police and soldiers arrived at the scene to cover security and bomb clearance.”
The officials inspected the scene thoroughly and found ten pieces of cast iron. The blast is assumed to cause byahandmade bomb made. The explosive material was packed insideacast tin, according to the investigation.
“The religious sermon was not finished at the time of the blast. The sermon was temporarily stopped because of the blast. The people who came to the sermon were agitated by the blast. Some went back to their homes and didn’t come back. But the monk continued with his sermon and continued with blessing the participants with holy water,” he said.
The car where the bomb was hidden is parked at the same location onadaily basis. At about 9.30 pm, the religious sermon still being conducted. Thenaloud explosion sounded to my ear, said the mother of doctor who belong to the car.
The police station from Mahaaungmyay Township is taken action with criminal act 286.
Four people injured as an explosion went off nearareligious preaching ceremony of Buddhist monk Sayadaw U Wirathu in Mahaaungmyay in Mandalay Sunday evening, injuring four people.
The religious sermon was held to mark the 5th Anniversity of Thahaponnyacaribon Donation Association of Mandalay.
The explosion took place atacar park 50 feet distant from the religious sermon held at 9.20 pm on July 21, police said.
The car is parked there almost every day. At about 9.30 pm, the religious sermon was not over. Thenaloud explosion sounded to my ear, said the mother of doctor who belong to the car.
The explosion caused four people injured and minor damage to the car and the injured were admitted to Mandalay General Hospital. Local police and troops arrived at the scene, launching investigation into the incident whether it isabomb explosion or not.
Someone on the motorcycle threw an object before the occurrence of the blast, saidawitness who is close to the scene.
New Letpadaungtaung deal- Wanbao and Ministry of Mines
CREDIT EMG 23.JULY 2013
Last year, police responded to demonstrations against the project’s environmental and social impacts withabrutal crackdown on November 29, using phosphorous against protesters.
While operating Sabeitaung and Kyaysintaung copper mine projects, the UMHEL had taken over 50 percent shares of No.1 Mining Enterprise with US$ 100 million and Yang Tse Mining Limited also took over 50 percent of Ivanhoe Myanmar Holdings Limited ( IMHL) with US$ 100 million.
Chinese Wanbao Company has been granted five years of tax exemption. Moreover, the company was also given different kinds of tax exemption for its imported heavy machineries including various types of vehicles. The Letpadaungtaung copper mine project isagiant project which can triple to profits compared with that of Sabeitaung and Kyaysintaung copper mine projects.